ငါ့ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ! ဒေါ်လာအတွက် blogging | Martech Zone
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 17, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
PayPerPost နဲ့ ReviewMe ပေါ်လာတဲ့အခါငါတော်တော်စိတ်ပျက်သွားတယ်။ 'ဒေါ်လာအတွက်ဘလော့ဂ်ရေးခြင်း' သည်အဆိုးဆုံးအတွက်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ယနေ့ညတွင်ငါ ReviewMe သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဘလော့ဂါများသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ပေးသောအခြားဘလော့ဂ်များတွင်ရေးသားချက်များကိုသတိပြုမိသည်။ ဒါကကျွန်တော့်အာရုံကိုဖမ်းစားလိုက်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်။
ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အယူအဆတစ်ခုပါ။ သင်၏ဘလော့ဂ်၏ဖော်ပြချက် (Alexa, Technorati, RSS စသည်တို့) ကို အခြေခံ၍ သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသည့်အခါသင်ငွေပေးချေလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်သောလူများ၏အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ သင်လျော်ကြေးငွေပေးသည်။ မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ ငါထင်တာကဒီကြော်ငြာရှင်တွေအတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ထပ်မံ၍ …
ReviewMe သည်သင့်အားအကောင်းမြင်သုံးသပ်ရန်ရေးသားရန်မလိုအပ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်လုံးဝရိုးသားနိုင်ပါတယ် ငါထင်တာကကြီးစွာသောထုတ်ကုန်တွေနဲ့ကြော်ငြာရှင်တွေကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ReviewMe ကမသမာတဲ့ကြော်ငြာရှင်တွေကိုမောင်းထုတ်လိမ့်မယ်။ ဟေး! ဒါကငါတို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ ငါလုပ်ချင်တဲ့နောက်ဆုံးအရာကငါ့ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်တဲ့သူတွေကိုစုံတွဲတစ်တွဲလောက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားသည့်အချိန်များစွာရှိသည်။ ငါ့မှာနာမည်ကြီးဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာဘီလီယံမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါကအချိန်နည်းနည်းပဲ။ လူများသည်ယောက်ျားကြီးများကို ဦး တည်ဆွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။
ငါသဘောကျအခြားအရာသူတို့ဖြစ်ကြသည် အလိုရှိ သင်လျော်ကြေးပေးခံရတဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်။
သင်ပို့စ်သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်လခပေးသောပို့စ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ရမည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတွေးအခေါ်များမှာ -“ စပွန်ဆာပေးသော”:“ အောက်ဖော်ပြပါသည်လခပေးသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” -“ ကြော်ငြာခြင်း” ။
ဒါကြောင့်စီးပွားရေးရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် ReviewMe ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလေးစားပြီးကောင်းကောင်းဆန္ဒပြုပါတယ်။ ငါ post ကိုစဉ်းစားရန်ကြိုးစားခဲယဉ်းသည့်အချိန်များရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကျောက်နှင့်ခဲယဉ်းရာဌာနအကြားမှီဝဲ။ ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်စာမရေးပါကအောက်သို့ ၀ င်ရောက်သည့်လမ်းကြောင်းကိုလုံးဝမြင်သည်။ ငါနေ့စဉ် post လုပ်လျှင်, ငါအသွားအလာတစ်ခုအထက်သို့လွှဲကြည့်ပါ။ အကြောင်းအရာငါ့ဘလော့ဂ်နှင့်အတူရှငျဘုရငျ IS ။ ငါလုပ်ချင်တာကဒီမှာမင်းရဲ့အချိန်ဖြုန်းနေတာပဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုထည့်သွင်းဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အချို့နေ့ရက်တွေမှာတင်ထားတာတွေကိုမေ့သွားတယ်။
ငါ ReviewMe ကိုခဏခဏဝင်မယ်။ ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကတစ်ခုခုအကြောင်းတင်သင့်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်ဖို့မလုံလောက်သေးတဲ့ 'ပျက်ပြယ်' တွေကိုဖြည့်ပေးနိုင်မလားဆိုတာငါကြည့်မယ်။ ငါလည်းနင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်။ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအန္တရာယ်မပေးချင်ဘူး
၀ န်ဆောင်မှုအတွက်တော့ဒါဟာတော်တော်လေးကိုရှေ့ကိုရောက်နေတယ်။ ငါ site ကိုသော်လည်း, ငရဲအဖြစ်ရှုပ်ထွေးကြောင်းပြောတကယ်တော့! ကြော်ငြာသူနဲ့ဘလော့ဂါအပိုင်းရှိတယ်။ သင်ဘယ်လမ်းကြောင်း၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုရှာဖွေသည်ကိုသိရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ဆိုဒ်ကိုထိုနည်းအတိုင်းမတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ အလျားလိုက်မီနူး၊ လက်ဝဲမီနူး၊ အကြောင်းအရာနယ်ပယ်ရှိရွေးချယ်စရာများ၊ အောက်ခြေမီနူးတစ်ခုရှိသည်။ ငါတစ်နေရာရာမှာအဲဒီမှာ၌ငါ့အဆင့်အတန်းကိုမြင်လျှင်မှတ်မိနေတုန်းပဲပြန်ရဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆလို့မရပါဘူး !!
ဒါကြောင့် ... အကြီးအထုတ်ကုန်, lousy အသုံးဝင်မှုရှိစေရန် ReviewMe ရှိလူများသည်ကြော်ငြာကိုကြော်ငြာသူများသို့မဟုတ်ဘလော့ဂါများမှတစ်ဆင့် ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘလော့ဂ်တစ်ခုထည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းများပြုလုပ်ရန်စသည်တို့ကိုအကြံပေးလိမ့်မည်။ ထို့နောက် interface ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ရမည်။ အဆင့်ဆင့်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ငါကြော်ငြာသူနှင့်ဘလော့ဂါစာမျက်နှာများနှင့်ဖြစ်စဉ်များအကြားကြီးမားတဲ့ခွဲခြားလိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ်။ အချင်းချင်းအပေါ်ခလုတ်များထားခြင်းသည်အနည်းငယ်ထူးဆန်းပြီးအလိုလိုမသိပါ။
ကောင်းပြီ၊ ဤသည် ReviewMe အပေါ်ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ... ReviewMe ၏! ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့ပွင့်လင်းတန်ဖိုးထားမျှော်လင့်ပါတယ်။
1:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 1, 53 တွင်
နောက်ဆက်တွဲ - ဒီနေ့အတွက် Paypal မှကျွန်ုပ်ငွေပေးချေမှုကိုရရှိသည်။